Ukuklama kobunjiniyela - iSuzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Amaphuzu ayi-7-KEY WOKWENZA IZINJINI
Isimiso seBottleneck, ikhanda elikhudlwana nomsila omncane.
Ukugwema ezinye zezinto ezingamabhodlela ezikhawulela umthamo wokukhiqiza. Isiqinisekiso senzelwe ukukhiqizwa okulindelwe nobunjiniyela obushelelezi.
Kubandakanya izinto zokusetshenziswa ezinqwabelene, indawo yokusebenzela yokukhiqiza, ukugcwalisa okuphelile, amahhovisi nezindawo zokuhlala, ukukhanyisa imigwaqo eluhlaza nezinye izinto.
Kubandakanya ukucutshungulwa kwempahla eluhlaza (ukugaya, ukuguga), ukwakha umzimba, inqubo yomlilo, ukukhipha izitini, ukupakisha, njll.
Ukukhethwa kwemishini yokwengeza:
Ngokusho kobuchwepheshe ukukhetha imishini yenqubo efanayo, ama-kilns, imishini yokusebenza, amasistimu wokulawula ngogesi, i-workshop, njll.
Isitoreji sempahla eluhlaza. Isitshalo sokugadla.Isitoreji esigugile.Umugqa wokuxhuma.Isitini esihlaza okotshani. 6-umhubhe ukomisa nokudubula-3. Imikhiqizo efakwe ngaphakathi.
Izimo Zendawo Ezisuselwa Kuzo
Ukuthungwa kwenqwaba yesibili yokulayisha nokuthulula ubuchwepheshe
Shale.Xinjiang Ukwakhiwa kwedolobha.Imikhiqizo esezingeni eliphakeme
Ukukhiqizwa kwemikhiqizo yebhulokhi engenalutho esezingeni eliphakeme, inkampani inamandla, ngokumaketha okuhle noma impahla eluhlaza enomswakama ophakeme.
Inhlabathi yemfucuza. Udaka lokuphila
Ukunqwabelana ngezendlalelo eziyi-7, ikamelo lokumisa imigudu emi-6, Ukugcina kwemikhiqizo eqediwe
Ukuthungwa kwesibili nobuchwepheshe obuncane bokomisa inqola
Okuqukethwe okuphezulu komswakama wezinto, cabanga ngokucatshangelwa kwezomnotho, le nqubo efanelekayo enkampanini encane naphakathi, isikhathi esisodwa noma ukubekwa kwesibili kungakhethwa.
Ukuthungwa kwesibili, uma ngabe kusesilinganisweni somlotha omkhulu wezimpukane, ukugcwala kwesibili kungcono kunesikhathi esisodwa, kunqwabelanisa ukuphakama kwenani elingenalutho ukuphakama, isivuno siyakhuphuka, izindleko zokutshalwa kwezimali ziphakeme kunesikhathi esisodwa, inkambu ephakeme kancane kunesikhathi esisodwa.
Inqubo yokufaka isitaki esisodwa
Izinto zokusetshenziswa (i-gangue yamalahle, i-shale, njll.) Enokuqukethwe okuphansi komswakama. Ukufakwa isitaki kwesinye isikhathi kwenza inqubo yokukhiqiza ibe lula, kunciphise imisebenzi, kuthuthukiswe izimo zezemvelo zabasebenzi, kuthuthukiswe ukukhiqizwa kwabasebenzi, ukusetshenziswa kwemishini nokuzisebenzisela kube lula, izindleko eziphelele zingaphansi kwenqubo yokufaka isitaki yesibili.
I-3.Gxila ekucwengweni kwempahla eluhlaza nasekwelapheni okufanayo
Ukulungiswa kwempahla eluhlaza
Ngokuya ngezinto ezehlukene nemikhiqizo esetshenzisiwe, ubukhulu bezinto zokusetshenziswa buhlukile. Kepha umgomo ojwayelekile ngukuthi imbudumbudu enhle yezinto zokusetshenziswa, izinto zokusetshenziswa zepulasitiki ziphakeme kakhulu, zivumelana nezidingo zomkhiqizo eziphakeme.
Cwenga izinto zokusetshenziswa kubhekiselwa ezinqeni zempahla eluhlaza ephukile ngomthelela wemishini emikhulu, bese kuthi impahla eluhlaza ingaphakelwa isivinini esisheshayo esisheshayo semishini encane yokuchoboza efana nesondo lokugaya, i-cage crusher, i-roll crusher, njll ekuhlawuliseni impahla eluhlaza.
Ukwelashwa umfaniswano impahla eluhlaza
Izinto ezingafakwanga ezingafaniyo, ikakhulukazi ngamanzi ezenzakalelayo nemishini ye-metering kagesi ngokulingana ukulungisa, ukugovuza, ukuthunyelwa kusitoreji sokuguga, okwenza izinhlayiya zezinto eziluhlaza zibe manzi, zikhishwe futhi zikhulise ukuzinza kwazo, zithuthukise izakhiwo zokubumba zezinto zokwakha, ukomisa izakhiwo nokusebenza kokubhaka, ukuthuthukisa amandla nekhwalithi yemikhiqizo.
Isakhiwo se-4.Kiln, naka umgomo wemikhiqizo yokushiswa okushisayo
Imikhiqizo yezitini ye-Changxing Tela enezitini eziyize ezingenalutho, inqubo idinga ukushisa okuphansi, ukoma kancane, ukugeleza komoya ngokulinganayo, ukubhaka ngokushesha. Ngakho-ke inqubo yokubhaka emithathu & eyodwa yokushisa, qiniseka ikhwalithi namandla.
I-Changxing Tela. 3-tunnel drying & 1-tunnel burn process
5.Stacking indlela, unake imikhiqizo sintered isimiso ezishisayo
Indlela yokufaka isitaki ibaluleke ngaphezu kokushisa
Izimiso ukuthi amandla aphakeme, anciphisa izindleko, ukusebenza okulula.
7.Uxolo, utshalomali nokonga amandla
Izinsiza kusebenza ezishintshayo, ukufakwa kwamarobhothi, ukwehliswa kwezitini, ukupakisha, amasistimu wokulawula okuzenzakalelayo.
Isitolo esikhulu seBricMaker, i-turnkey, isevisi yokumisa okukodwa.
Wonke umsebenzi wethu wokuqinisekisa ukuhamba kahle kwenqubo yokukhiqiza, ukuqinisekisa ikhwalithi, ukufezekisa umnotho wesikali, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, ukwenza ngcono ukusebenza kahle, futhi kube lula kakhulu ngemikhuba yokuphatha ye-opharetha, ukuthuthukisa isithombe senkampani.